Redmi waxay soo bandhigi doontaa TV-gii ugu horeeyay ee Smart ah Ogosto 29 | Androidsis
Redmi Smart TV wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhigid
Eder Ferreno | | Qalabka kale, Xiaomi
Redmi wuxuu noqday mid kamid ah noocyada ugu firfircoon maanta, oo leh taleefoonno aad u tiro badan oo horeyba loo heli jiray, iyo qaar jidka ku sii jira. Laakiin astaantu maaha inay diirada saarto kaliya taleefannada, tan iyo Waxaan ognahay toddobaadyo inay heystaan ​​TV-ga casriga ah oo socda, oo soo bandhigitaankiisa ugu dambeyn si rasmi ah loo shaaciyey.
Isla bishaas Waxaan si rasmi ah u ogaan karnaa Redmi Smart TV, kii ugu horreeyay ee lagu soo saaro sumaddan. In kasta oo hadda uun la soo saaray iyada oo ku taal suuqa Shiinaha la xaqiijiyay. Laakiin waxaan horeyba u ogaanay qaar ka mid ah faahfaahinta ku saabsan.
Bandhigga Redmi Smart TV wuxuu dhacayaa Ogosto 29. Waxay noqon doontaa dhacdo isku mid ah oo loogu talagalay taleefankaaga cusub, Redmi Note 8, sida la xaqiijiyay dhowr saacadood ka hor. Marka sumadda Shiinaha waxay nooga tagi doontaa waxyaabo badan oo ugub ah dhacdadan dhammaadka bishan.
Waxaa la filayaa inay jiri doonaan dhowr nooc oo cabir ahaan ah. Ilaa hada Waxaa la xaqiijiyay inay jiri doonto 70-inji, in kasta oo ay sidoo kale jiraan hadal kale oo 40-inji ah. Marka waxaan heli karnaa dhowr ikhtiyaar oo aan kala dooran karno arrintan. Nidaamku wuxuu la mid noqon doonaa kan telefishanka Xiaomi.
Faahfaahin dheeraad ah oo badan lama xaqiijin ku saabsan Redmi Smart TV. Waxaa la filayaa inuu yeesho xallinta 4K. Marka lagu daro helitaanka taageerada HDR iyo Dolby + DTS Audio. Laakiin tani waa wax ilaa iyo hadda aan la xaqiijin, laakiin waxaa jira mala-awaal iyo xan badan oo ku saabsan TV-gan.
Sugiddu aad ugama dheereyso arrintan. 29-ka Ogosto, waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa TV-ga ugu horreeya ee casriga ah ee shirkadda 'Redmi brand'. Waxaan ogaan karnaa markaa TV-gan in laga hirgelin doono Yurub iyo in kale. Inkasta oo telefishannada sumadda si dhib yar ayey joogitaan ugu lahaayeen suuqa Yurub ilaa hada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Redmi Smart TV wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhigid
OnePlus 7T iyo 7T Pro waxay sii deyn doonaan taariikhaha mar labaad
Google Play ayaa meesha ka saaraya 85 barnaamij oo soo bandhigay xayeysiisyada mobilka